Vivo V15 Pro ga-abịa na igwefoto okpukpu atọ na ihe mgbapụta mmapụta maka selfies | Gam akporosis
Vivo V15 Pro ga-abịa na igwefoto atọ na ihe mgbapụta mmapụta [Akwụkwọ Mgbasa Ozi]
Isi ụlọ ọrụ Vivo dị na India na nso nso a zigara akwụkwọ ịkpọ oku na mwepụta ngwaahịa na February 20, ebe a na-atụ anya ka ụlọ ọrụ ahụ gosipụta ya V15 Pro.
A na-atụ anya Vivo V15 Pro iji gosipụta a mmapụta igwefoto na ụdị nhazi ọhụụ nke na-eme ka ngwaọrụ ahụ rute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obere. Otu akwụkwọ ozi ọkwa na-achọ nkwado abanyela ugbu a n'ịntanetị, na-egosi ekwentị site n'akụkụ ọ bụla.
Akwụkwọ mmado ahụ weghaara ihu na azụ ihu nke ngwaọrụ ahụ yana nke nwere mmasị bụ igwefoto n'ihu n'ihu na ihuenyo ahụ, dị ka nke dị na Vivo Nex. Nhazi ihu dị ka nke a kwa, naanị V15 Pro ga-adị ọnụ ala. (Chọpụta: Vivo APEX 2019: Ekwentị ọhụrụ na-enweghị bọtịnụ, ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ oghere)
Akwụkwọ Vivo V15 Pro
The n'azụ imewe na-agụnye a Vertikal jikọtara okpukpu atọ n'azụ igwefoto ntọala na-wuru na-Ikanam flash n'etiti abụọ mbụ ihe mmetụta. Enweghị ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ, nke pụtara na ngwaọrụ ahụ ga-enwe sensọ mkpịsị aka na-egosipụta. Ọzọ ihe anyị nwere ike bulie si sụgharịa bụ na ngwaọrụ ga nwere àjà ihe ọ -ụ -ụ-mkpa etiti.
Maka ụdịdị, Vivo V15 Pro na-atụ anya ịgụnye a Chipset nke Qualcomm Snapdragon 710, ma enweghi ihe akaebe doro anya na nke a. A na-atụ anya ịmalite akwụkwọ na India na February 15, mana ekwughi ikwuputa ugwo onu ahia. A na-atụ anya na Vivo V15 Pro ga-abata na India maka ihe dị ka 25,000 rupees (~ 305 euro) na 30,000 rupees (~ 366 euro), n'otu n'otu, ebe o nwere ike ị bia n'ụdị RAM abụọ na ebe nchekwa dị.
Ihe omuma ndi ozo, dika onodu ihuenyo, ikike batrị ma obu ihe ndi ozo di na njedebe amaghi, ya na ihe nile banyere inweta ya n'uwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo V15 Pro ga-abịa na igwefoto atọ na ihe mgbapụta mmapụta [Akwụkwọ Mgbasa Ozi]
Ngwunye gam akporo na-abịa Realme 2 Pro n'oge na-adịghị anya: Geekbench dekọtara ya
Huawei kwupụtara anyị maka mmemme na February 24 na MWC